Miteraka ahiahy momba ny fiainana tsy ahahaka ny tsy fitoviana amin’ny politikan’ny fanangonana lahatahiry ao amin’ireo orinasa pan-Afrikàna sasany ao Oganda · Global Voices teny Malagasy
Politika samy hafa no ampiharin'ny MTN sy Airtel isam-pirenena
Voadika ny 04 Desambra 2021 4:04 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, English, Español, Português, English
Sary avy amin'i Mr_Achraf nalaina tamin'ny 17 aogositra 2021. Azon'ny rehetra ampiasaina, tsy mila fahazoana alalana (CC0)
Nanambara fihazohazoana amin'ny politikan'ny fiainana tsy ahahaka an'ireo orinasam-pifandraisana Airtel sy MTN, ireo orinasan'ny tolotra ara-bola toy ny Stanbic Bank, ary ny orinasa fiantohana Old Mutual ny Unwanted Witness, fikambanana fiarahamonim-pirenena any Ogandà tamin'ny tatitra 2021 nataony momba ny fiainana tsy ahahaka. Tena hafa amin'ny politikan'izy ireo any amin'ny faritra hafa ao amin'ny kaontinanta ny politikan'ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny fiainana tsy ahahaka an'ireo orinasa Pan-Afrikanina miasa ao Ogandà ireo.
Nilaza tamin'ny Global Voices nandritra ny resadresaka tao amin'ny Zoom i Dorothy Mukasa, Tale Jeneralin'ny Unwanted Witness fa nanombatombana ny fanajana ny Lalànan'ny Fiarovana Angon-drakitra sy Fiainana tsy ahahaka Ongadey 2019, izay nolaniana mba hiarovana ny zon'ny olom-pirenena momba ny fiainana tsy ahahaka amin'ny alalan'ny “fifehezana ny fanangonana torohain'ny tena manokana ao Ogandà sy any ivelany” ny fikarohana.
Samy manana politikan'ny fiarovana angon-drakitra sy fiainana tsy ahahaka manerana ny firenena afrikanina samihafa ny Airtel, MTN, Stanbic Bank ary ny Old Mutual. “Voaporofo tamin'ny fiovaovana miharihary amin'ny halavan'ny politikan'ny fiainana tsy ahahaka sy amin'ny isan'ny zo natao ho an'ireo mpiserasera izany. Tranga amin'ny fampiharana mampihazohazo amin'ny fampiasana ny politikan'ny fiainana tsy ahahaka izany”, hoy ny fanamarihan'ny tatitra.
Nanadihady ny isan'ireo teny tao amin'ireo antontan-taratasy politikan'ny fiainana tsy ahahaka sy ny angon-drakitr'ireo orinasa ireo tao Nizeria, Afrika atsimo sy Oganda ny Unwanted Witness. Nahita izy ireo fa vitsy ny teny ao amin'ny fanambaràna politika Ogandey raha oharina amin'i Nizeria sy Afrika Atsimo.
Ny vokatr'izany dia hoe “amin'ny maha kely kokoa ny teny, vitsy kokoa ny zo voalaza na tsy voalaza mihitsy” hoy ny fitarainan'ny tatitry ny Unwanted Witness.
Naoty ratsy momba ny fiainana tsy ahahaka ao Ogandà
Pikantsarin'ny haavon'ny fiarovana angon-drakitra manjaka ao amin'ny sokajim-pikambanana fito izay nohadihadiana tamin'ny tatitra momba ny naotin'ny fiainana tsy ahahaka nataon'ny Unwanted Witness tamin'ny taona 2021.
Nilaza i Mukasa fa manombatombana ny tatitra “Raha misy ireo orinasa any Oganda izay mirotsaka amin'ny raharaham-panangonana sy fikirakirana angon-drakitra. Ny antony fototra dia ny hiantohana fa misy ny fanajana ny fanangonana angon-drakitra, ny fialàna amin'ny fitrandrahana ny olona tsirairay amin'ny alàlan'ny fanangonana angon-drakitra. “
Ny fikarohana, izay nanomboka tamin'ny 20 Aogositra 2020, dia nanasongadina ireo sokajin'orinasa Ogandey 32 ho ao anaty sokajy fito lehibe: e-varotra, tolotra ara-bola, tolotra fifandraisandavitra, tolotra fiantohana, sampan-draharaham-panjakana, fiarovana ara-tsosialy, ary hopitaly/fitsaboana an'olontsotra. Mampihatra ny ambaratongan-kintana dimy, nandahatra ireo orinasa ireo tamin'ireto sehatra manaraka ireto ny tatitra: manaja ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fiainana tsy ahahaka, manome torohay ho an'ny tompon'ny angon-drakitra alohan'ny hanangonana ny angon-drakitra, manondro ireo (mpiantsehatra fahatelo) hizaràna ny angon-drakitra an-olontsotra, mampihatra fiarovana angon-drakitra matanjaka, ary mampahafantatra izay fangatahan'ny governemanta momba ny angon-drakitra.
Nanadihady ny “politikan'ny fiainana tsy ahahaka azo tsapain-tanana, mazava ary azon'ny besinimaro jerena” ny fikarohana. Izany, hoy i Mukasa, dia ny hiantohana fa “tsy hanova mangingina ny politikany ireo “mpanangona lahatahiry.” Nikasa hametraka ny tatitra fa tokony naharay ny “Fanekena nampahafantarina” ny mpanjifa ny orinasa alohan'ny hahazoana ny lahatahirin'izy ireo. Nanadihady ny fizarana ny lahatahiry amin'ny (mpiantsehatra fahatelo) ihany koa ny Unwanted Witness.
Mahatonga ny mpanjifa ho marefo any amin'ireo firenena tsy misy politika matanjaka momba ny fiarovana angon-drakitra ny politika mihazohazo momba ny lahatahiry sy ny fiainana tsy ahahaka ataon'ireo orinasa manerana an'i Afrika. Ohatra, maivan-danja ny antontan-taratasy politika an'ireo orinasa any Ogandà raha ampitahaina amin'ny antontan-taratasy politika “matanjaka kokoa” momba ny fiainana tsy ahahaka Nizeriana sy Afrikanina Tatsimo. Manolo-kevitra izany fa “matanjaka sy miasa ny lalàna sy ny manampahefana” any Nizeria sy Afrika Atsimo”, araka ny tatitra.
Nampiseho ny tsy fahampian'ny fanajana miharihary ny Lalàna momba ny Fiainana tsy ahahaka sy ny Fiarovana Angon-drakitra, ary ny fisian'ny toerana sy famantarana mpitsongo mpizaha ny ao amin'ireo orinasa maro nohadihadiana, amin'ireo finday sy ny fampiharan'ny tranonkala izay manangona sy mivarotra lahatahiry ho amin'ny tombotsoa ara-barotra tsy misy politika mangaraharaha.
Mampiseho ny famakafakana ny fomba fanajan'ny sampan-draharaham-panjakana sy ireo orinasa ao Ogandà ny lalàna fiarovana ny lahatahiry 2019 fa saika manaraka an-tsakany sy an-davany tsara amin'ny fitsipika fiarovana matanjaka ny lahatahiry ny ankamaroan'ny sehatra. Ny sampana mpanome tolotra ara-pahasalamana Ogandey no tsy dia mahavita indrindra eo amin'ity sehatra ity. Tolotra ara-pahasalamana maro no “manangona lahatahiry saingy … tsy manana rafitra fototra ho amin'ny fiainana tsy ahahaka. ” Nanazava i Muksa fa nampiantranoana antserasera miaraka amin'ny mpitsongodia izay “mamakafaka ny lahatahiry”, ka mampidi-doza ny “fiainana tsy ahahaka sy fiainan'ireo marary ” ireo angon-drakitr'olona manokana ireo.
Ny zo fiarovana lahatahiry sy ny orinasam-pifandraisandavitra Afrikana
Tsy ny tatitry ny Unwanted Witness no voalohany nahita fa manana firaisana tsikombakomba tamin'ny fanitsakitsahana ireo zo tsy hampihahaka fiainan'ireo Ogandey mpanjifany araka ny voalazan'ny lalàna Ogandey ireo orinasan'ny fifandraisan-davitra toy ny MTN sy ny Airtel. Ohatra, tsy nahavita nampahafantatra ireo mpampiasa ny “fomba fanangonana ny angon-dry zareo, sy ny izarana izany, ary ny antony” ny vondrona MTN monina any Afrika Atsimo araka ny Tondro 2019 momba ny Tamberin'Andraikitry ny Orinasa momba ny Zo Ankihy.
“Tsy dia mamoaka firy momba ny fomba fitantanany ny lahatahirin'olontsotra ny MTN ary tsy manana rafi-pitantanana matanjaka momba ny zon'olombelona”, hoy ny nosoratan'ilay mpanao gazety Abdi Latif Dahir avy ao amin'ny Quartz Africa. Tsy dia manome fampahalalana na tsy manome mihitsy ny habetsaky ny angon-drakitra angonony, ny faharetan'ny fitahirizana ny angon-drakitra, raha misy mpiantsehatra hafa (fahatelo) afa-miditra amin'izany, na ny arofenitra ampiasaina raha sanatria misy ny fanitsakitsahana ny fiainana tsy ahahaka ity vondrona fifandraisandavitra ity. “Tsy avoakany ny antsipiriany izay atahorana (amin'ny fiarovana) ny fiainana tsy ahahaka izay mety mitranga amin'ireo servisy dokambarotra ankihy mpitily,” hoy i Dahir nanoratra.
Namoaka tatitra momba ny fangaraharana ny vondrona MTN tamin'ny taona 2020 manazava amin'ny antsipirihany ny fomba fikirakirany ny mombamomba ireo mpanjifa 220 tapitrisa any amin'ny firenena Afrikanina 22 izay iasany. Na dia dingana lehibe amin'ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny fiainana tsy ahahaka aza izany, dia tsy ampy.
Nangataka i Isedua Oribhabor sy Berhan Taye ao amin'ny fikambanana mpiaro ny zo ankihy Access Now mba “hanitaran'ny MTN ny tatitra ataony ka hanambara ireo torohay tena manandanja momba ny fangatahana fihazonana angon-drakitra, angon-draki-pifandraisana, metadata sy fampahalalana manodidina ny fametrahana ny teknolojiam-pisakanana, ary ny dingana raisin'ny MTN handavana ireo fangatahana tsy mety, ao anatin'izany ny fampahalalana amin'ny antsipiriany ny fomba fitantanany ny baiko fanakatonana aterineto.
” Tamin'ny volana Aprily 2021, firenena Afrikana 28 (amin'ireo 54) no namoaka lalàna sy fitsipika hiarovana ny angon-drakitra an'olontsotra manokana. Mampiseho izany fa mihamitraka ao amin'ny kaontinanta ny lalàna fiarovana ny angon-drakitra. Nilaza anefa i Mukosa ao amin’ny Unwanted Witness hoe: “Ny fampiharana no dingana sarotra indrindra amin’ny fiarovana ny angona eto Afrika.” Noho izany, nanantitrantitra i Mukasa fa tsara toerana tsara kokoa hiaro ny zo momba ny angon-drakitra sy ny fanitsakitsahana ny fiainana tsy ahahaka ao amin'ny kaontinanta ny fiarahamonim-pirenena, rehefa mahaleotena.